मधेसी क्रांति ३ को तेस्रो फेज: क्रांतिकारी संगठन निर्माण
पहिलो फेज थियो अनिश्चितकालीन मधेश बंद को। फ़ासिस्ट सुशील-बामे सरकारले जवाफमा जताततै अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाउने र टाउको ताकि ताकि गोली हान्ने काम गर्यो। मधेसी लाई झिंगा जस्तो गरेर मार्यो। दोस्रो फेज रहेको छ नाकाबंदी को। पहिलो भन्दा बढ़ी effective तर क्रांति लाई गंतव्य सम्म अझ पुर्याउन नसकेको। अब क्रांति को तेस्रो फेज बारे सोँच्ने बेला आएको छ। क्रांति अहिले दशैं-तिहार-छठ ब्रेक मा छ। नाकाबंदी केही खुकुलो भएको छ। आत्म समीक्षा गर्दै नया रणनीति बनाउने समय हो यो। क्रांति को उठान कसरी गर्ने --- सोंचने बेला हो।
मधेसी क्रांति ३ को तेस्रो फेज: क्रांतिकारी संगठन निर्माण हो। क्रांतिकारी संगठन निर्माण भनेको के? बंद कायम रहन्छ। नाकाबंदी अझ टाइट हुन्छ, १००% नाकाबंदी। कतै कुनै चुहावट हुँदैन। अनि दैनिक वडा सभा गर्दै क्रांतिकारी संगठन निर्माण हुन्छ। तीन बाहुन दल को संगठन मधेसमा पुर्ण रुपले ध्वस्त पारिन्छ। गच्छेदार पाकेटमार हो, उसको तुलनामा सुशील, ओली, प्रचंड त डकैत हुन। पाकेटमार को पार्टी जिल्ला जिल्ला गायब हुने, डकैत को पार्टी चाहिँ किन गायब नहुने?
क्रांतिकारी संगठन निर्माण भनेको के? अहिले २०,००० सदस्य भएको पार्टी को दुई हप्ता भित्र सदस्य संख्या दुई लाख, चार लाख पुर्याउने। तीन बाहुन दल को सदस्यता लिएका मधेसी हरु को घर घर दस्तकत, गएर आग्रह गर्ने। तपाईंले आफ्नो पार्टी छोड्नु पर्यो। आफ्नो इच्छा को मधेसी पार्टी को सदस्यता लिनुस अथवा नया पार्टी खोल्नुस्।
क्रांतिकारी संगठन निर्माण मा पैसा खर्च हुँदैन। किनभने यो मुख्य रुपले वडा लेवल मा हुन्छ। आफ्नै वडा मा हिडेर सभास्थल पुग्न के को खर्च? चुनाव पनि Open Caucus का आधारमा हुन्छ। न बैलट छाप्नु छ न केही। सदस्य हरु को नाम भने टिपिन्छ। दैनिक। आज भन्दा भोलि बढ़ी मान्छे बटुल्ने। अनि प्रत्येक वडा बाट गाउँ लेवल मा फ़ोन गर्दै, गाउँ बाट जिल्ला लेवल, अनि केंद्र। दैनिक सदस्य संख्या घोषणा गर्ने। दैनिक तीन बाहुन दल कति ले छोड़े त्यो फ़्लैश गर्ने।
त्यसरी वडा सभा मा आउने ले आफ्नो इच्छा लागेको मधेसी पार्टी को सदस्यता लिने।
र यस क्रांतिकारी संगठन निर्माण विस्तार लाई तीन हप्ता मा सीमित राख्ने।
दशैं-तिहार-छठ ब्रेक मा माग पुरा नभए सरकार र संविधान ढाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
दशैं-तिहार-छठ ब्रेक को भरपुर प्रयोग
माग त केही बदलिँदैन। माग सार्वजनिक छ। तर तीन बाहुन दल का बिभिन्न तहका नेता सके जति लाई भेट्ने। घनीभूत छलफलमा जाने। आफ्नो कुरा राख्दै जाने। आफ्ना तर्क हरु राख्दै जाने। टन्न वार्ता गर्ने।